ဒဏ္Matchာရီပွဲစဉ် | ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » ဒဏ္ဍာရီပွဲစဉ်
တစ်ဒဏ္ဍာရီပွဲစဉ်များအတွက် T ကရှပ်အင်္ကျီ M / F ပေါ့ပါးပါးပျဉ်း
6 အောက်တိုဘာလ 2007 တွင်ချယ်လ်ဆီးအသင်းကာဒစ်ဖ်အတွက်ကမ္ဘာ့ဖလား၏ quarterfinals အတွက်ပေါင်းချုပ်တွေလည်းပွဲစဉ်အတွင်းအားလုံးလူမည်းတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ တကျိပ်ကျော်နှစ်ကြာပြီးနောက်ကျနော်တို့နေဆဲပြင်သစ် (- 20 18) ၏အဖွဲ့ကအနိုင်ရဒီအရူးဂိမ်းသတိရပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတိုးဆိုင်၌ဤလှပသော unisex ချွေးရှပ်အင်္ကျီကိုရှာပါ
ဒီဂိမ်းကိုကစားခဲ့ထောင်စုနှစ်, ကာဒစ်ဖ်၏စင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါချယ်လ်ဆီးအသင်းဆန့်ကျင်မီးခိုးရောင်ဝတ်စုံ၏ဤသည်နေ့ရက်တပ်ဆင်ထားပြီး, အားလုံးလူမည်းတွေဖြစ်ကြသည်။ စစ်တိုက်ခြင်းငှါဂိမ်းရှေ့၌၎င်း, ကောင်းစွာလယ်ပြင်မဝင်ခင်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်နယူးဇီလန်အသင်းအပေါငျးတို့သပွဲဖွင့်လှစ်သောနာမည်ကျော် Haka စဉ်အတွင်းယင်းချယ်လ်ဆီးအသင်းဖျက်သိမ်းကြပြီမဟုတ်။ သူတို့ဟာ Haka "ခံစားခဲ့ရ", ဒါပေမယ့်စည်းလုံးညီညွတ်, လက်မောင်းအတွက်လက်မောင်းတိုက်ပွဲတွေကြပြီမဟုတ်။ သူတို့ကအခွန်ကောက်နေကြသည်။ ထိုအခါနယူးဇီလန်ကစားသမားဖြည့်ဆည်းရန်ဤလမ်းတွေအများကြီးဆိုလိုသညျ။
အဆိုပါပွဲစဉ်အတွင်းပွေီးမှရပ်တန့်ကြသည်မဟုတ်။ အနည်းငယ်ထက် ပို. လေးမိနစ်ပြီးနောက် Rococoko ကြားခံ Betsen လုံးဝတံပိုးမှုတ်သောအခါ, ကမ်းခြေ၌ထားလေ၏။ ဒါဟာ Thierry Dusautoir သည်သူ၏အသက်တာ၏ပွဲစဉ်ကစားသောဤအဆင့်တွင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အထွေထွေအများပြည်သူအမည်မသိကြောင့်မျက်နှာလူမည်းတွေရှာတွေ့ခဲ့သည်နှင့် 38 ပွဲအတွက် tackles ထက်ပိုပြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ရန်ပွဲတစ်ဦးအလှတရားခဲ့သည်ဟုဆိုနိုငျသညျ။ အဆိုပါသက်ရောက်မှုအစွမ်းထက်သံတွေ, ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ပါပြီ။ အားလုံးကစားသမားသူတို့ရဲ့အမွေးအတောင်ကျန်ကြွင်းစေပြီ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဖွင့်ပေးတော်မူပြီ။ ပြင်သစ်စမ်းသပ်မှုအစစ်အမှန်လက်ရာခဲ့ကြသည်။ လှပသော, တိကျ။ အပြာရောင်၏လုပ်ရပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တရများနှင့်အပေါငျးတို့သရပ်ဂ်ဘီပရိတ်သတ်တွေအတွက်ခြစ်ရာမပေါ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ မိမိအမှတ်ဉာဏ်ဆဲအဖွဲ့ဝင်များကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော်ယနေ့ဂိမ်းအပေါငျးတို့သသူရဲကောင်းများအနည်းငယ် မှလွဲ. တော့ဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြောင့်ဂိမ်းကတည်းကဆယ်နှစ်တွင်, ချယ်လ်ဆီးအသင်းများအတွက်ကပ္ပတိန် Thierry Dusautoir အတူ 2009 အတွက်ကိုသာအားလုံးလူမည်းတွေတခါရိုက်နှက်ခဲ့ကြသည်။